कोरोन भाइरसबाट आफ्नालाइ बचाउन अपनाईए अचम्मका उपाए - Himali Patrika
कोरोन भाइरसबाट आफ्नालाइ बचाउन अपनाईए अचम्मका उपाए
हिमाली पत्रिका २७ माघ २०७६, 4:55 am
काठमाडौँ । पछिल्लो समय चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसबाट ज्या न गु माउनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढीरहेको छ । सोमबार बिहानसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट ज्या न गुमाउनेको संख्या ९ सय १० पुगेको छ । यसमध्य फिलिपिन्स र हङकङमा एक एक जना रहेको छन् ।
आइतबार चीनमा मात्रै ९७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । चीनमा आइतबार मात्रै २ हजार ९ सय ७३ जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् । यो सँगै हालसम्म चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ४० हजार १ सय ७१ पुगेको छ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै चीनमा मानिसहरु घर बाहिर निस्कन मुस्किल पर्न थालेको छ । यसका बाबजुद् चीनका नागरिकहरु कोरोनाको संक्रमणबाट बँच्न काटिएका पानीका जार र ठुलो प्लास्टिक लगाएर हिँड्न थालेका छन् ।
मानिसहरुले माक्स, पन्जा, हेल्डमेटसहित शरीरमा प्लास्टिक र बाक्लो कपडाले बाँधिएर हिँडेका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन् ।
चीनमा रहेका नेपाली भन्छन्, ‘जसरी हुन्छ फर्काउनुपर्‍यो’
चीनमा रहेका नेपालीहरुसंग अन्नपूर्णपोस्टले गरेको कुराकारी
अनुपराज शर्मा : नमस्कार। तपार्इंहरूको अवस्था कस्तो छ ?
डा. पोखरेल : हाम्रो अवस्था एकदमै नराम्रो छ। यहाँ बाँच्न गाह्रो छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको बढ्यै छ। मान्छे मरेका मर्‍यै छन्। अर्को कुरा दैनिक खाद्यवस्तुको पनि अभाव छ।
शर्मा : चीन सरकारबाट कस्तो सहयोग भइरहेको छ ? नेपाल सरकारले कुनै किसिमको सहयोग गरेको छ कि छैन ?
डा. पोखरेल : नेपाल सरकारले १० दिनअघि हाम्रो लिस्ट बनायो। आश्वासन दियो। हामीलाई लैजान सक्नुहुन्न भने कृपया हामी बसेको ठाउँमा आउनुस् भनेको थिएँ। यहाँ आएर भेट्नुस्। कसरी लैजाने, सल्लाह गरी आश्वासन दिनू भनेर मैले आग्रह पनि गरें। के गर्ने ? कसरी गर्ने ? सल्लाह गर्नुस् भन्दा गर्न चाहनुभएन। हाम्रो रिपोर्टिङ खासै राम्रोसँग गर्नुभएजस्तो लाग्दैन। हाम्रो अवस्था एकदमै नाजुक छ। कोही गर्भवती हुनुहुन्छ। बच्चासहित बसेका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई झन् धेरै तनाव छ।
शर्मा : अरू देशका विद्यार्थीको अवस्था के छ ?
डा. पोखरेल : होस्टेलमा कम्तीमा सय जना थियौं। अब ६ जना मात्र छौं। अरू सबै गइसक्नुभएको छ।
शर्मा : आफ्ना विद्यार्थीलाई सम्बन्धित देशले के उद्धार गरिसक्यो ?
डा. पोखरेल : हजुर, उद्धार गरिसक्यो। मेरो अनुरोध के भने सर, कोरोेना भाइरस बिल्कुल नयाँ हो। यसको अवस्था कस्तो छ ? के छ ? भन्न गाह्रो छ। चीन सरकारले हामीलाई कोठामा (क्वारेन्टाइन) बस भनेको छ। बाहिर निस्केपछि जोखिम हुन्छ भनी अनुरोध गरेको अवस्था छ। हामी आफैं ‘क्वारेन्टाइन’मा बसेको अवस्था छ। १४–१५ दिनदेखि बाहिर निस्केका छैनौं।
हामीमा भाइरस संक्रमणको लक्षण देखिएको छैन। हामी संक्रमित होइनौं। यो अवस्थामा हामीलाई उद्धार गर्नु ठीक हुन्छ। ढिलो गर्‍यो भने कुनै पनि नेपालीलाई भाइरस संक्रमण हुन सक्छ। ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौं। हामी अहिले स्वस्थ छौं। नेपालमा राखिने क्वारेन्टाइनमा बस्न तयार छौं। अहिलेको अवस्थामा हामीलाई यहाँबाट निकाल्नुपर्‍यो।